China Igwe ikuku mmiri na-ekpuchi ọkụ ọkụ (2.2) ụlọ ọrụ na ndị na - eweta ya | Anbesec
Nnukwu mmiri na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ (2.2)
Nnukwu nrụgide mmiri na-emenyụ ọkụ ọkụ nwere ọrụ abụọ na uru nke ịgba mmiri na ikpocha gas. Ọ nwere mmetụta dị jụụ nke mmiri na-agba mmiri na ikuku nke ikuku ọkụ ọkụ.
High mgbali mmiri alụlụ mgbapụta akara kabinet mejupụtara kpakpando Delta njikwa, programmable njikwa, mmetụta, akara circuit, kabinet na n'akụkụ ndị ọzọ.
1. Isi mmiri nke usoro
The HPWM mejupụtara nnukwu mgbali isi mgbapụta, mgbapụta njikere, valvụ akpa, nyo, mgbapụta akara kabinet, mmiri tank nzukọ, mmiri na-enye netwọk, mpaghara valvụ igbe mmiri, elu nsogbu mmiri alụlụ ịgba isi (gụnyere na-emeghe ụdị na mechiri emechi ụdị), Usoro nchịkwa ọkụ ọkụ na ngwaọrụ na-emeju mmiri.
2. Ngwa nhazi ọkwa nke elu nsogbu mmiri alụlụ
(1) Ofụri Esịt submerged mmiri alụlụ usoro
A mmiri alụlụ ọkụ emenyụ usoro nwere ike evenly ịgba mmiri alụlụ n'ime dum nchebe ebe iji chebe niile nchebe akpọkwa n'ime.
(2) Obodo ngwa mmiri alụlụ usoro
Spray mmiri alụlụ ozugbo na ihe nchebe, ejiri chebe ihe nchebe pụrụ iche ime ụlọ na n'èzí ma ọ bụ mpaghara.
(3) Usoro ntinye mmiri nke ngwa mpaghara
Usoro ikuku mmiri iji kpuchido mpaghara a kara aka na mpaghara nchedo.
(1) Enweghị mmetọ ma ọ bụ mmebi gburugburu ebe obibi, ihe ndị echedoro, ngwaahịa dị mma maka gburugburu ebe obibi.
(2) Ezigbo ihe mkpuchi eletriki, nchebe ma nwee ntụkwasị obi na ọgụ ọkụ nke akụrụngwa dị ndụ
(3) Obere mmiri eji eji ọkụ, na ntakịrị mkpofu mmiri.
(4) Ihe ịgba mmiri na-agba mmiri nwere ike belata oke anwụrụ ọkụ na nsị na ọkụ ahụ, nke na-enyere aka ịpụpụ ebe nchekwa.
(5) Ezigbo ọkụ na-emenyụ arụmọrụ na ngwa ngwa.
(6) Mmiri - ihe na-emenyụ ọkụ, wide nso nke isi mmalite na ọnụ ala.
4. Adabara ịlụ ọgụ ọkụ ndị na-esonụ:
(1) Ọkụ siri ike na-enwu enwu na stacks, ọdụ data ochie, ebe nchekwa ọdịnala, wdg.
(2) Ọkụ mmiri na-enwu ọkụ nke dị na ọdụ ụgbọ mmiri, mmanụ gbanwere mmanụ, ụlọ nkwakọba mmanụ, ụlọ nkwakọba mmanụ, ụlọ injin mmanụ dizel, ime ụlọ mmanụ ọkụ, ebe a na-ere mmanụ ọkụ ọkụ, ebe a na-agbanye mmanụ na ebe ndị ọzọ
(3) Ọkụ na-enwu enwu nke gas na-enwu n'ọkụ n'ime ụlọ gas na-ebupụta gas.
(4) Ọkụ eletriki ọkụ n'ime ụlọ nkesa, ụlọ kọmpụta, ime igwe nhazi data, ime ụlọ igwe nkwukọrịta, ime ụlọ nchịkwa, nnukwu ụlọ ime ụlọ, ọwara eriri (corridor), eriri igwe na wdg.
(5) Nnwale ọkụ na ebe ndị ọzọ dịka ụlọ nnwale injin na ọwara okporo ụzọ kwesịrị ekwesị maka mgbochi ọkụ ọkụ mmiri.
5. High nsogbu mmiri alụlụ ọkụ emenyụ usoro nwere ike malitere site na atọ ụdịdị, na-akpaghị aka na-amalite, aka (ime ma ọ bụ obodo) mmalite na n'ibu mmalite mmalite.
Akpaaka: Ka ịgbanwee njikwa akara na extinguisher n'ime Nchekwa onwe, mgbe ahụ usoro dị na akpaka ala.
Mgbe ọkụ na-eme na mpaghara echedoro, onye na-achọpụta ọkụ na-achọpụta ọkụ ma na-ezigara onye na-ahụ maka ọkụ ọkụ ihe mgbaàmà. Onye na-ahụ maka ọkụ ọkụ na-akwado mpaghara nke ọkụ ahụ dị ka adreesị nke onye na-achọpụta ọkụ, wee zipụ akara ngosi njikwa nke njikọ jikọọ usoro mgbanyụ ọkụ, wee mepee valvụ mpaghara kwekọrọ. Mgbe emeghere valvụ ahụ, nrụgide nke ọkpọkọ ahụ na-ebelata na mgbapụta mgbapụta na-akpaghị aka malitere karịa 10 sekọnd. N'ihi na nrụgide ahụ ka na-erughị 16bar, nnukwu mgbapụta isi mgbapụta na-amalite na akpaghị aka, mmiri dị na sistemụ usoro nwere ike iru nrụgide ọrụ ngwa ngwa.
Iji aka na-achịkwa: Iji gbanwee ọkụ njikwa mode n'ime Manual Control, mgbe ahụ usoro dị ntuziaka akara ala.
Remote mmalite: mgbe ndị mmadụ hụrụ ọkụ na-enweghị nchoputa, ndị mmadụ nwere ike na-amalite nwoke bọtịnụ nke valvụ eletrik ma ọ bụ valvụ eletrik site na etiti nchịkwa ọkụ, mgbe ahụ nfuli enwere ike ịmalite na-akpaghị aka iji nye mmiri maka imenyụ ọkụ.
Bido na ebe: mgbe ndị mmadụ hụrụ ọkụ, ha nwere ike mepee igbe bara uru dị na mpaghara, wee pịa bọtịnụ njikwa iji gbanyụọ ọkụ.
Mbido usoro ihe eji arụ ọrụ: N'ihe banyere ọdịda usoro mkpuchi ọkụ, njikwa na valvụ mpaghara nwere ike iji aka rụọ ọrụ iji mepee mpaghara ahụ iji gbanyụọ ọkụ ahụ.
Mgbe imenyụ ọkụ ahụ, kwụsị isi mgbapụta site na ịpị bọtịnụ nkwụsị mberede na nchịkwa nchịkwa nke otu mgbapụta ahụ, wee mechie valvụ mpaghara na igbe valvụ mpaghara.
Igbapu mmiri na isi pipeline mgbe ịkwụsị mgbapụta ahụ. Pịa bọtịnụ nrụpụta na ogwe nke njikwa mgbapụta iji mee usoro na steeti nkwadebe. A na-emebi usoro ahụ wee nyochaa dị ka usoro mmebi nke usoro ahụ, nke mere na ihe ndị dị na usoro ahụ dị na steeti ọrụ.
6. Kpachapụ anya
6.1 A ga-edochi mmiri dị na tankị mmiri ọkụ na akụrụngwa mmiri na-enye ọkụ oge niile dabere na gburugburu ebe obibi na ọnọdụ ihu igwe. Ekwesiri ime ihe iji hụ na akụkụ ọ bụla nke akụrụngwa nchekwa ọkụ agaghị ajụ oyi n'oge oyi.
6.2 Ogwe mmiri ọkụ na mmiri nyocha ọkwa mmiri, akụrụngwa ọkụ na-enye mmiri a ga-emechi isi abụọ nke valvụ nkuku mgbe enweghị ọkwa ọkwa ọkwa mmiri.
6.3 Mgbe ị na-agbanwe ojiji nke ụlọ ma ọ bụ ihe owuwu, ọnọdụ nke ngwongwo na elu nke nchịkọta ga-emetụta ọrụ a pụrụ ịdabere na usoro ahụ, lelee ma ọ bụ mezigharị usoro ahụ.
6.4 Usoro a kwesiri inwe nyocha na mmezi ya oge niile, tọ na-enyocha kwa afọ ga-eme ihe ndị a:
1. Na-atụle ike mmiri nke usoro mmiri mmiri mgbe niile.
2. Otu nyocha zuru oke maka akụrụngwa nchekwa ọkụ, ma mezie nkwarụ ahụ wee rụgharịa ya.
6.3 Nyocha nke ọnwa nke usoro ahụ kwesịrị iru ihe ndị a chọrọ requirements
1. All na njedebe nke nkwekọrịta ahụ na-anwale usoro nyocha mmiri na valvụ na-achịkwa mmiri dị nso na mmiri nyocha mmiri ka emere, nyocha usoro mmalite, ọrụ mkpu, na ọnọdụ mmiri bụ nkịtị;
2. Lelee valvụ njikwa na ọkpọkọ mmiri ọkụ dị n'ọnọdụ zuru oke.
6.4 Nyocha kwa ọnwa ga-emezu ihe ndị a:
1. Malite ịgba mgbapụta ọkụ otu oge ma ọ bụ ọkụ ọkụ ọkụ nke ikuku na-ere ọkụ. Malite, mgbe ọkụ mgbapụta maka akpaka akara, simulate akpaka akara ọnọdụ, na-amalite na-agba ọsọ 1 ugboro;
2.A ga-enyocha valvụ solenoid otu ugboro wee mee nyocha mmalite, ma gha edochi ya mgbe oge ahụ na-adịghị mma
3. Lelee usoro otu oge na akara akara akara ma ọ bụ agbụ dị mma, ma valvụ nọ n'ọnọdụ ziri ezi;
4.Ọdịdị nke mmiri ọkụ ọkụ na akụrụngwa na-enye ọkụ ikuku mmiri, ọkụ na-echekwa mmiri na ikuku nke ọkụ ikuku ikuku mmiri ga-enyocha otu ugboro.
6.4.4 Mee otu ngosipụta maka oghere na oghere mapụtara, ọdịiche dị iche iche kwesịrị ka edochi ya n'oge kwesịrị ekwesị;
A ga-ewepụ ihe mba ọzọ na nozulu n'oge. Dochie ma ọ bụ wụnye sprinkler ga-eji spanner pụrụ iche.
6.4.5 Nyocha kwa ụbọchị:
Ọdịdị nke mmiri ọkụ ọkụ na akụrụngwa na-enye ọkụ ikuku mmiri, ọkụ na-echekwa mmiri na ikuku nke ọkụ ikuku ikuku mmiri ga-enyocha otu ugboro.
Nnyocha kwa ụbọchị ga-agbaso ihe ndị a:
1 .Mee nlele anya nke valvụ dị iche iche ma na-achịkwa otu dị iche iche na pipeline mmiri, ma hụ na usoro ahụ na-arụ ọrụ nkịtị
2 .Onye kwesiri ikpo oku nke ulo ebe etinye ihe nchekwa mmiri, o gaghi adi ala 5 ° C.
6.5 Mmezi, nyocha na ule ga-edekọ ya n'ụzọ zuru ezu.
Nke gara aga: Nnukwu nrụgide mmiri na-emenyụ ọkụ （2.1）
Osote: High mgbali mmiri alụlụ usoro-FM Kwadoo (1)
Linear Okpomọkụ Detector NMS2001 USB
NMS1001-P Ọnụ Unit (EOL Igbe)
High mgbali mmiri alụlụ ọkụ emenyụ sys ...
NMS2001-M Control Unit